Fanafody matanjaka ho an'ny zaridaina sy zaridaina, fampiharana
Fanaovana akora simika - fialokalofana harona betsaka
Ny tsiranoka amin'ny zavamaniry dia ampiasaina mba hampitomboana ny fitomboan'ny zavamaniry, ny fihenan'ny bibikely ary ny fitomboan'ny vokatra, izay ahitana farafahakeliny mineraly roa farafahakeliny ho an'ny orinasa. Azo ampiasaina amin'ny karazan-tany samihafa izy ireo amin'ny fotoam-pisakarana sy amin'ny dingana rehetra amin'ny zavamaniry.
Toeram-pamokarana be pitsiny ho an'ny zaridaina sy zaridaina
Ny lazan'ny karazana mineraly mineraly dia noho ny fisian'ny tombontsoa maro be, saingy aloha ny tsy fahampiana, satria iray monja - singa kely iray, izay tsy manome fahafahana hisafidy ny kolontsaina tsirairay ho safidy tsara.
Hatramin'ny fananganana dia misy singa maromaro, misy ny fifantohana amin'ny singa ilaina. Amin'io fotoana io, ny sodium, ny chlorine ary ny zavatra hafa mampidi-doza dia kely na kely na tsy misy.
Ny fampiasana ny dite matevina dia manampy amin'ny fanangonam-bola, ary koa ny toerana fitahirizana sy fitaterana.
Ny vokatra tsara amin'ny fampiasana ny vokatra fanampiny toy izany dia azo atao na dia tsy ampy ny hafanana aza.
Azo atao ny mampiasa fitaovana fanampiny ho an'ny fambolena izay tsy azo ekena ny fitomboan'ny tsindry amin'ny osmotic amin'ny vovo-tany.
Tendrombohitra be pitsony ho an'ny voatabia
Satria ny legioma dia legioma iombonana, ny mpamokatra dia namolavola an'ity kolontsaina ity, ary mifandanja tsara amin'ny zavatra ilaina. Ny tsiranoka mineraly masira ho an'ny voatabia dia manome sakafo mahavelona amin'ny singa fototra, izay manjary mahakasika ny fahavokarana ny tany ary mampitombo ny vokatra. Isika amin'izany dia afaka manavaka isika:
Monophosphate of potassium. Ny firafitra dia ahitana ny phosphorus sy potassium, izay manampy amin'ny fanatsarana ny metabolism. Azo ampiasaina amin'ny vahaolana (15 g isaky ny sotro rano) ilay entana, ary amin'ny endrika maina (mitsambikina eo amin'ny 10 cm eo ho eo avy eo). Tsara kokoa ny fampiasana azy amin'ny fizotry ny fampandrosoana.
Calcium nitrate. Anisan'izany ny kalcioma sy ny azôty. Mampiroborobo ny fandrosoana sy ny fambolena. Eo amin'ny siny rano dia mila 20g supplement. Ny fampiasana dia asaina mialoha ny voninkazo sy ny endriky ny voankazo. Ho an'ny famafazana dia mampihatra 1% ny vahaolana.
Mpanao dity manitra ho an'ny ovy
Ny fototarazon'ity zavamaniry ity dia malemy ary miditra lalina any an-tany mba hahazoana vinaingitra tsy azony, fa ny mpiangona dia nalaina avy any amin'ny tany ambony, ka zava-dehibe ny mametraka ny fahaverezana. Orinasa goavambe malaza ho an'ny ovy:
Potassium nitrate. Misy potasy sy azôty, hany ka tsara ny fiakarana ambony. Isaky ny 1 metatra toradroa dia vonona ny hampiasa 15-20 g.
Nitrofos. Misy ny azota sy ny phosphorus ao anatin'io firafitra io. Ny famokarana legiom-bokatra fambolena ho an'ny legioma dia tokony ho amin'ny fararano miaraka amin'ny fambolena lalina ny tany.
Orinasa goavambe ho an'ny tanimboly
Ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany dia manampy amin'ny fihazonana ny fahasalaman'ny zavamaniry, hampitombo ny vokatra ary hiarovana amin'ny aretina sy bibikely samihafa. Rehefa misafidy mineraly mineraly be dia be ho an'ny strawberries, dia tarihan'ireo safidy malaza indrindra:
Diammonium phosphate. Ny votoatin'ity tafio-drivotra ity dia misy karazany maro: calcium, magnesium, solifara, potassium, phosphorus ary nitrogen. Noho ny endriky ny kôlôra, dia niparitaka be ny zavatra ilaina ao anaty tany.
Ammophos. Ahitana ny phosphor sy ny azôty, ary azo ampiasaina amin'ny karazana tany rehetra izany. Ny fingonona toy izany dia manala ny zavamaniry miaraka amin'ireo zavatra ilaina, izay zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana tsara sy fampiroboroboana ny fahaiza-miaro amin'ny aretina isan-karazany.
NPK. Ny firafitra dia ahitana be loatra ny solifara, eo amin'ny 2%. Ampiasao izy io amin'ny fahavaratra rehefa tapitra ny voninkazo. Zava-dehibe ny mampihatra haavo an-tsokosoka mivantana avy hatrany mba handrandrahana trondro. Ho an'ny rano 10 litatra dia tokony haka 1.5 sobika fitaratra.
Fofona manitra ho an'ny raspberry
Raha salama tsara ny kirihitra, dia hisy loko matevina eo amin'ny 2 m ny haavony, ary ny voa dia tokony ho 1 kg avy ao anaty kirihitra. Mba hahatratrarana izany, dia ilaina ny mampiasa fitaovana fanampiny. Azo atao amin'ny fomba mahaleotena ny fahavokarana be pitsiny ho an'ny zaridaina, fa zava-dehibe ihany ny manara-maso tsara ny fatrany, raha tsy izany dia tsy hisy vokany ratsy ny zavamaniry.
Afangaro 30 g ny nitrate ammonium, 60 g supèrphosphate ary 40 g siramamy potassium. Tokony hihinana tsara ny sakafo rehetra. Ilaina ny manamboatra diloilo toy izany indroa isan-taona: 2/3 ny ampaha lohataona ary ampahany 1/3 amin'ny volana Jona.
Raha mikasa ny hamboly katsaka vaovao ianao, dia atolory mba handefa fanampiana fanampiny ao anaty lavaka, ohatra, ampiasao ity safidy ity: 80 g sulfide potassium, 200 g ny supèrphosphate ary 8 kg humus. Raha tsy misy ireo zavatra roa voalohany, dia azonao atao ny mandray 500 g ny lavenona. Voalohany, tokony hifangaro amin'ny tany ny diloilo, ary avy eo, azonao atao ny mamafy ny voanjo.
Mandritra ny famokarana mavitrika dia ilaina ny mampiasa ny " Ideal " efa voaomana. Mitaky 10 litatra ny entana 3 tbsp. vovon-tany. Ny fitotoana dia atao eo akaikin'ny kirihitra, amin'ny fiheverana fa ho an'ny 1 m2 isaky ny 7 litatra.
Fofona zavamaniry ho an'ny cucumbers
Amin'ny fampiasana ny fitrandrahana mineraly, azo atao ny mampitombo ny fitomboan'ny zana-ketsa, mampitombo ny fotoam-pamokarana sy ny habetsaky ny vokatra, ary koa miaro ny kirihitra amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny bibikely sy aretina. Ny tsiranoka mineraly mineraly amin'ny kôkômbinina dia natao tamin'ny fitsipika sasany:
Alohan'ny famolavolana ny zana-ketsa (mandritra ny 2 herinandro) na ny voa, ilaina ny mampangotraka ny azota amin'ny azôty, ny fosfôlasy ary ny potassium 15/10/15 g. Ny isa isaky ny 1 metatra.
Mamboly intimora in-telo ny seza, ary noho izany dia tokony hampidirina ny dite matevina misy superphosphate, nitrate ammonium ary mullein. Ny fotoana voalohany ilainao hanaovana izany dia eo amin'ny dingan'ny taratasy voalohany, ny faharoa - aorian'ny fisehoana ny taratasy fanalahidy manaraka sy ny fahatelo - ao anatin'ny tapa-bolana.
Rehefa manondrana entana dia aleo any amin'ny lavaka dia tokony hametraka supèrphosphate, chloride potassium ary ny ammonium nitrate.
Mba hahatonga ilay zavamaniry ho tsara, dia miforona ny tifitra, ilaina ny mampiasa nitroka, calcium ary phosphorus. Ho an'ny fananganana voankazo dia azo atao tsiranoka amin'ny azota, magnesium ary potassium. Ny fanampiana dia tokony ampiana isaky ny 2-3 herinandro.
Tendrontany feno ho an'ny voaloboka
Ny karazany samihafa amin'ity zavamaniry ity dia mitaky ary ny fahazoana vokatra be dia be, dia ilaina ny mampiasa fitaovana fanampiny. Ny voaloboka dia mila ireto singa manaraka ireto:
Azota. Manatsara ny fitomboan'ny ravina sy ny jono tanora. Ilainao fotsiny ny mitondra azy io amin'ny lohataona.
Phosphore. Mineraly manan-danja amin'ny fampiroboroboana ny felam-bantoka, ny owara ary ny fambolena tsaramaso. Ampiasao izany alohan'ny hanombohan'ny voninkazo.
Potasioma. Mampitombo ny fanoheran'ny zavamaniry ho solon'ny hafanana, haintany, ny tsy fahampian-drano ary ny bibikely. Tsara kokoa ny manapaka azy amin'ny fararano.
Ilaina ihany ny boribory, ny varahina, ny zina ary ny magnesium. Ny dite ara-karazana organika dia mety ahitana vorona, tavoahangy, dongo, lavenona, menaka oliva ary ny hafa. Mitondrà sakafo amin'ny fomba toy izao:
Any am-piandoham-bary, afaka mampiasa alika mangotrakitra, ohatra, "Rastorin" na "Master". Amin'izay fotoana izay ihany, ny fanangonam-bary ny loharano lohataona dia tanterahana.
Alohan'ny fambolena, manolo-tena ny fampangatsiahana ranom-boankazo, izay misy dolom-boanjo matevina (ampahany 1: 2). Aorian'ny fivalozana azy, dia mendri-pitokisana izany in-5 izy io ary mampiditra superphosphate sy potassium sira 20/15 g amin'ny siny. Mariho fa tokony ho 2 eo ho eo ny sakafom-pisakafoanana.
Mampiasa menaka be pitsony ny alikaola rehefa misy brydia ary ny haben'ny habeny dia eo amin'ny vozona. Ny fampiarahana dia misy azota, phosphorus ary potilium eufilisers 40/50/30 g. Ny siny dia entina 30 g.
Rehefa tsiranoka ny voankazo dia ampiasaina (5 g ny kirany).
Vovobony ho an'ny voninkazo
Ny zavamaniry ho an'ny fampandrosoana mety, ny voninkazo tsara sy ny fiarovana amin'ny bibikely sy ny aretina dia mila fikarakarana tsy tapaka. Ny tsiranoka marefo amin'ny raozy sy ny voninkazo hafa dia tokony sokafana eo amin'ireo safidy natolotra:
Ammophos. Ny gara mainty dia misy azota sy phosphor ary misy rano tsy mety.
Nitrophoska. Ny fanafody dia aseho amin'ny granules izay misy potasy, phosphor ary nitrogen. Tokony hampidirina aloha ny lohataona alohan'ny famafazana sy amin'ny fahavaratra.
Nitrofos. Voaomana ny ankamaroan'ny loko, ary misy kalcioma, azôty ary phosphorus.
Tendrombohitra voankazo ho an'ny hazo fihinam-boa
Ny mahazatra dia manampy ny fanampiana amin'ny lohataona voalohan'ny lohataona, mba hahazoan'ny hazo ny herin'ny fitomboana, ny famolavolana taratasy ary ny famokarana vokatra. Mariho fa tsy maintsy ny hafanana ny lohataona marefo, raha tsy izany dia tsy hianatra ny fakany. Afaka ampiasaina fanampiny fanampiny, izay be rano be. Ilaina ny maka komposta misy ny nitroka, izay mampiroborobo ny fampidinana ny fizotran'ny zavamaniry. Vokatr'izany, ny hazo dia manomboka haingon-javatra vaovao, mamelatra tsimok'aretina, ary maniry tsara kokoa ny ravina.
Ahoana ny fisafidianana ny vongan-dranomandry feno?
Rehefa mividy fanampiana, ilaina ny mandray ny toetran'ny akora sy ny mekanika amin'ny tany, ny kalitao amin'ny vongan-drano voafantina ary ny mari-pamantarana ny zavamaniry. Aza hadinoina ny mijery ilay famolavolana ary, raha azo atao, mividy ilay orinasa, izay noforonina manokana. Ny fampiasana ny dite matevina dia tokony hisaina fa ilaina ny mametraka azy ireo amin'ny tany mavesatra amin'ny fararano, ary ao amin'ny havokavoka alohan'ny famafazana. Tadidio fa ny vola lany amin'ny fambolena voajanahary dia tsy maintsy mandoa harena betsaka.
Fitaovana matevina "Power Power"
Io fanafody malaza io dia ahitana ny zavatra manan-danja ho an'ny sakafo mahavelona amin'ny zavamaniry. Ny singa fototra (NPK) dia mikolokolo, izay manan-danja amin'ny fampiatoana ny fitomboana ary ny fitomboan'ny fanoherana. Ny dite matevina ho an'ny zaridaina dia ahitana vitamina ho an'ny rafi-panafody tena manan-danja. Ny mpanamboatra dia manolotra safidy maro samihafa, ohatra, fanampiana natao ho an'ny zana-boanjo, legioma, voninkazo ary ny sisa.
Tsy maintsy atao amin'ny rano ny "dite tsara" ao anaty rano, arakaraka ny torolalana omena ao amin'ny fonosana. Aza hadinoina aloha ny tavoahangy. Azo atao ny manao akanjo fotsy sy volom-borona, izay tsara kokoa hanoloana ny vokatra tsara. Ny tahirin-kevitra mifantoka dia manome tsiron-tsakafo ara-tsakafo.
Complex vulgaris «AVA»
Ireo be mpanaraka an'io orinasa io dia malaza, ary misaotra noho ny antony tokony hampidirana azy indray mandeha. Ny vokatra dia ho hitantsika avy hatrany ary hitoetra mandra-pahatongan'ny fampiharana manaraka. Ny angovo mineraly mineraly "AVA" dia mety amin'ny hazo, legioma, voninkazo sy ahitra. Mihoatra ny antsasaky ny fiasa dia ny phosphorus, ary misy koa ny calcium, potassium, magnesium ary chromium. Lisitry ny zavatra vitsivitsy ihany izay ato amin'ity ampahany ity. Misy lisitra feno ao amin'ny fonosana.
Ny fanafody "AVA" dia aseho amin'ny endriky ny kapsules miaraka amin'ny loko sy granule ary vovoka. Azo ampiasaina amin'ny dingana maro samihafa amin'ny fampandrosoana, avy amin'ny fanangonam-bozaka ary manomana saha mankany amin'ny ririnina. Ilaina ny mihevitra fa mihoatra ny 95% ny zava-mahadomelina. Rehefa ampiasaina ny fanampiana, ny zavamaniry dia manjary matanjaka, manomboka mamelana, mandefitra kokoa ny hatsiaka amin'ny ririnina sy ny hain-tany amin'ny lohataona, ary mbola tsy marary, manome vokatra be dia be, ary ny voankazo dia mihamora haingana, ny hatsaran-tarehy sy ny matsiro.
Famokarana angovo "Reakom Mikom"
Ny fanampiana avy any an-toerana, izay manana kalitao ambony, dia manintona sy mahomby ny tontolo iainana. Anisan'izany ny vy, cobalt, zinc, varahina, molybdenum, manganese ary zavatra hafa. Ampiasao toy ny zana-ketsa toy izany ho an'ny zana-kazo, dingana samihafa amin'ny fampandrosoana ary alohan'ny fijinjana. Misaotra ny famatsian-tsakafo, mitombo ny herin'ny fikajiana, ny fiterahana sy ny fanoherana ny aretina, manatsara ny voninkazo sy ny kalitaon'ny vokatra.
Toeram-pandeham-biriky mitafo-drano be dia be "Biomaster"
Ny endrik'ity tafio-drivotra ity dia ahitana nitroka, phosphor ary potassium, izay miteraka lisitra manan-karena ireo toetra mahasoa. Rehefa ampiasaina, manatsara ny toetry ny tany ary manomboka tsara ny zavamaniry. Ny fampiroboroboana dia manan-danja amin'ny fandanjana ny organika sy ny mineraly ao amin'ny tany, ary miaro azy io amin'ny fikarakarana sy fanasiana. Ny entona manangon-java-manan'aina dia anaty rano, ary amin'ny endrika maina. Ny voalohany dia ny fametrahana ny zavamaniry, ary ny faharoa dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny tany.
Ahoana no hanomezana kirihitra hohanina?
Mitombo ccommons ao anaty trano fambolena amin'ny ririnina
Tariby ny voa any an-trano
Ny fikorianan'ny gladiola alohan'ny nambolena
Rehefa manokatra raozy ny lohataona - foto-drafitr'asa tena ilaina amin'ny fikarakarana sahaza
Fanitsiana ny zaridaina amin'ny lohataona - fomba hiarovana ny vokatra amin'ny aretina sy ny bibikely?
Ahoana ny fomba handosirana ny dandelion tsy mety ao amin'ny tranokala?
Vinnytsia - toetoetran'ny mpizahatany
Andro iraisam-pirenena ho an'ny blondes
Haircut bean 2015
Masha sy ny Mainty
Ahoana no hanaovana portfolio ho an'ny zazalahy?
Ahoana no hanombohana azy?
Fanomezana ho an'ny Papa nandritra ny 60 taona
Tafiditra ao amin'ny trano famakiam-boky - ireo tsiambaratelo amin'ny famoronana hatsaran-tarehy sy firaiketam-po
Oil ny Hemp - tsara sy ratsy
Ny zokiny vavy
Kuperoz - fitsaboana any an-trano
Thyrotoxicose - soritr'aretina
Sidy trano fisakanana eo ambanin'ny log
Totoana amin'ny saka - antony, fitsaboana
Meditation amin'ny loko